Rant: Ny teny miafina momba ny teny miafina sy ny traikefan'ny mpampiasa | Martech Zone
Talata, Desambra 9, 2014 Talata, May 2, 2017 Douglas Karr
Angamba ny fanapahan-kevitra tsara indrindra noraisiko tamin'ity taona ity momba ny vokatra sy ny fiarovana ahy dia ny fisoratana anarana Dashlane. Tsy mitazona ny teny miafiko rehetra momba ny finday, ny birao ary ny tranokala amin'ny rafitr'izy ireo azo antoka. Ny marina dia tsy fantatro akory hoe inona ny teny miafiko hatramin'ny nampiasako ilay Dashlane Chrome Plugin hidirana amin'ny alàlan'ny tranonkala, ny Desktop Version ho an'ny apps, ary ny Mobile App ho an'ny fidirana Mobile App.
Dashlane dia manana fiasa fanampiny vitsivitsy tiako. Voalohany, afaka mizara tenimiafina amin'ireo mpampiasa nahazo alàlana aho - tsara ho an'ny mpitantana ny birao, mpitan-kaonty, mpitantana tetikasa ary mpamolavola ahy. Azoko atao ny manome azy ireo ny fidirana feno hahita ny teny miafina na zona voafetra hampiasana azy tsotra izao. Ary manolotra fifandraisana maika azoko apetraka izy ireo. Raha tsy misy antony ahazoako manome alalana olona avy amin'ny lisitra vonjy taitra - azon'izy ireo atao ny mangataka fidirana. Raha tsy mamaly aho mandritra ny fotoana iray dia mahazo miditra amin'ny Dashlane kaonty.
Satria mampiasa azy io amin'ny alàlan'ny fitaovana, tamba-jotra ary lampihazo aho - tiako ny manana trano fitehirizana iray isaky ny fidirana ary koa ny lalan-kaonty. Dashlane milaza amiko koa izay tenimiafina izay tsy dia sarotra loatra ka mametraka ahy amin'ny loza. Ankehitriny manana tenimiafina tsy manam-paharoa sy matanjaka izay tsy mitovy amin'ny rafitra rehetra idirako. Ka raha misy mahazo ny iray amin'ny teny miafiko dia tsy mahazo miditra amin'ny serivisy rehetra izy ireo. Ary raha manandrana miditra ao Dashlane izy ireo dia mila manome alalana ny fitaovana vaovao rehetra manandrana miditra aho.
Izay mitondra ahy amin'ny olako amin'ny tenimiafiko. Dashlane nanamora ny fiainako folo heny fa ny fampiharana sasany dia manasarotra ny fiainako folo heny. Marary mafy aho satria tsy maintsy mampiditra teny miafina isaky ny 2 segondra ho an'io sehatra io ihany. Manavao fanavaozana fampiharana iray… mila miditra ianao. Sintomy ny hira… tsy maintsy ampidirinao ny teny miafinao. Ovay ny fikirakirana fitantanana… tsy maintsy miditra ny teny miafinao. Na eo aza ny zava-misy Izaho dia efa niditra tao anatin'io fotoana io ihany!
Aza mangataka amin'ny olona hanao teny miafina sarotra sy sarotra izay tsy takatra amin'ny efijery iray… ary avy eo mangataka azy ireo handefa ny teny miafina isaky ny hetsika manaraka mandritra ny traikefan'ny mpampiasa! Miaraka amin'ireo rafitra toa an'i Dashlane, tsy tadidiko intsony ny tenimiafiko fa mandika fotsiny aho ary mametaka azy ireo. Midika izany fa mila miditra ao amin'ny Dashlane aho, mandika ny teny miafina, manokatra ny app, mandefa ny teny miafinao, ary avy eo mametaka azy isaky ny fangatahana aorian'izay.
Tiako ny finday sasany mifindra any amin'ny kaody 4-na famafana ny filaharana fa tsy mametraka ahy ny teny miafina 14 feno litera, tarehimarika, marika sns. Tiako ihany koa ny fahafahako mampiasa ny dian-tànako amin'ny fitaovana iOS hanamarinana amin'ny fampiharana sasany (tokony hanana an'io ny rehetra!).
Manolora olona manana teny miafina tena azo antoka safidy tsotra kokoa handroso amin'ny alàlan'ny sehatra. Tsy mampaninona ahy ny mametra fotoana sy mangataka teny miafina indray, fa rehefa ao amin'ilay fampiharana aho dia mampihomehy tanteraka.
Fampahafantarana: Raha misoratra anarana a Dashlane kaonty miaraka amin'ny my Dashlane rohy etsy ambony, mahazo 6 volana aho Dashlane Premium!
Tags: dashlanetenimiafinauser experience